စုစုပေါင်းအချက်အလက်များနှင့်ပြornနာများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုလေ့လာခြင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏အရေးကြီးမှု - စိန်၊
FULL စက္ကူ LINK
အောက်တိုဘာလ 2011, အတှဲ 40, Issue 5, စစ 1045-1048
Drew အေ Kingston
အဖြစ်ဤဆောင်းပါးကိုကိုးကား: Kingston, DA & Malamuth, nm Arch လိင် Behav (2011) 40: 1045. Doi: 10.1007 / s10508-011-9743-3
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးသုတေသီများအကြားတွင်အတော်အတန်ငြင်းခုံမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် (Malamuth, Addison, & Koss, 2000; Marshall, 2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းကိုကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသက်သေအထောက်အထားများသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ဥပဒေပြုရေးအတွက်သာမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကဲ့သို့သောအထူးလူ ဦး ရေ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုတို့တွင်အရေးကြီးသည်။ ဤဝေဖန်ချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ထားသောနည်းလမ်းများအားခေတ္တမျှဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်စိန်၊ အချို့သောသူများ၏အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုအမူများနှင့်အပြုအမူများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္ literature နှင့်ပတ်သက်သောစာပေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်နိဂုံးချုပ်သည်။
Allen, အမ်, D'Alessio, D. , & Brezgel, K. (1995a) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် meta-analysis သည်ထိတွေ့မှုပြီးနောက်ကျူးကျော်ခြင်း။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 22, 258-283 ။CrossRefGoogle Scholar
Allen, အမ်, Emmers, တီ, Gebhardt, အယ်လ်, & Giery, MA (1995b) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္myာရီများကိုလက်ခံခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 45, 5-26 ။CrossRefGoogle Scholar
Boeringer, အက်စ် (1994) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: မုဒိမ်းမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု proclivity နှင့်အတူအကြမ်းဖက်များနှင့်အကြမ်းမဖက်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏အသင်း။ Deviant အပြုအမူ, 15, 289-304 ။CrossRefGoogle Scholar
စိန်, အမ်, Jozifkova, အီး, & Weiss, P. (2010) ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ရာဇ ၀ တ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ Doi:10.1007 / s10508-010-9696-y က.
စိန်, အမ်, & Uchiyama, အေ (1999) ။ အပြာစာပေ၊ မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများ။ ဥပဒေနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 22, 1-22 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Hald, GM, & Malamuth, nm (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏မိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဒိန်းမတ်လူ ဦး ရေ၏ကိုယ်စားပြုနမူနာတစ်ခုတွင်ပြသထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 614-625 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Hald, GM, & Malamuth, nm (၂၀၁၁) ။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏စမ်းသပ်သက်ရောက်မှု: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စိစစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ပြင်ဆင်မှုအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Hald, GM, Malamuth, NM, & Yuen, C. (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများ - အတွေ့အကြုံမရှိသောလေ့လာမှုများမှဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်း။ ရန်လိုမူအကျင့်, 36, 14-20 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
ကင်မ်, အမ်, & Hunter, ဂျေ (1993) ။ သဘောထားများ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်ဆံရေး။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 20, 331-364 ။CrossRefGoogle Scholar
Kingston, DA, Fedoroff, P. , Firestone, P. , ဟင်း, အက်စ်, & ဘရက်ဖို့ဒ, JM (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - လိင်မှုကျူးလွန်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အမျိုးအစား ရန်လိုမူအကျင့်, 34, 341-351 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Kingston, DA, Malamuth, မိုင်, Fedoroff, JP, & မာရှယ်, WL (2009) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အရေးပါမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုကုသရန်သီအိုရီဆိုင်ရာအမြင်များနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 216-232 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Knight, RA, & Sims-Knight, (2003) ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှေ့ပြေးပုံစံများ - ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာယူဆချက်များကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ RA Prentky, ES Janus နှင့် MC Seto (Eds ။ ) တွင် လိင် coercive အပြုအမူ: နားလည်မှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (စစ။ 72-85) ။ နယူးယောက်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။Google Scholar
Kutchinsky, ခ (1973) ။ လိင်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်း၏လွယ်ကူသောရရှိနိုင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: အဆိုပါဒိန်းမတ်အတွေ့အကြုံကို။ လူမှုရေးကိစ္စများ၏ဂျာနယ်, 29, 163-181 ။CrossRefGoogle Scholar
Kutchinsky, ခ (1991) ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု: သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်။ ဥပဒေနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 14, 47-64 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
LaFree, G. အ (1999) ။ လူသတ်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကိုအကျဉ်းချုပ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ MD Smith & MA Zahn (Eds ။ ) တွင် လူသတ်မှု: လူမှုရေးသုတေသနတစ်ဦးက sourcebook (စစ။ 125-145) ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage ။Google Scholar
Lam, CB, & ချမ်း, DK-S ကို။ (2007) ။ ဟောင်ကောင်ရှိလူငယ်များအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 36, 588-598 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Malamuth, မိုင် (2003) ။ ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုမကင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူများ။ RA Prentky, ES Janus နှင့် MC Seto (Eds ။ ) တွင် လိင် coercive အပြုအမူ: နားလည်မှုများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (စစ။ 33-58) ။ နယူးယောက်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။Google Scholar
Malamuth, မိုင်, Addison, တီ, & Koss, အမ် (2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသလား။ လိင်သုတေသနနှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 11, 26-91 ။PubMedGoogle Scholar
Malamuth, NM, & Pitpitan, EV (2007) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုအမျိုးသားများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုအန္တရာယ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်သည် DE Guinn (Ed ။ ) ၌, ညစ်ညမ်း: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိင်လူကုန်ကူးမှုများအတွက်ဝယ်လိုအားမောင်းနှင်? (စစ။ 125-143) ။ Los Angeles မြို့: သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသမီးမီဒီယာ။Google Scholar
မာရှယ်, WL (2000) ။ သီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဂျာနယ်, 6, 67-77 ။CrossRefGoogle Scholar
Oddone-Paolucci, E. , Genuis, M. , & Violato, C (2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေထားသောသုတေသနပြုမှု၏ meta-analysis ။ C. Violato, အီး Oddone-Paolucci, & အမ် Genuis (Eds ။ ) ၌တည်၏ ပြောင်းလဲနေသောမိသားစုနှင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (စစ။ 48-59) ။ Aldershot, အင်္ဂလန်: Ashgate ထုတ်ဝေရေး။Google Scholar
ရော်ဘင်ဆင်, WS (1950) ။ ဂေဟစနစ်ဆက်စပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အပြုအမူ။ အမေရိကန်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 15, 351-357 ။CrossRefGoogle Scholar
ရှိန်း, JW, Lee က, အက်စ်, & ပေါလု, ခ (2007) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်မလိုလားသောလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများအားမည်သူတုံ့ပြန်သနည်း။ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အခန်းကဏ္။ ။ CyberPsychology နှင့်အပြုအမူ, 10, 71-79 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Subramanian, SV, ဂျုံးစ်, K. , Kaddour, အေ, & Krieger, N. (2009) ။ ရော်ဘင်ဆင်ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း - တစ် ဦး ချင်းဆိုင်ရာနှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာမှားယွင်းသောသုံးသပ်ချက်များ၏အန္တရာယ်။ ကူးစက်ရောဂါများ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 38, 342-360 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Vegas, V. , & Malamuth, nm (2007) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္ general နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ။ ရန်လိုမူအကျင့်, 33, 104-117 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Weinberg, MS, Williams, CJ, Kleiner, S. , & Irizarry, Y. (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 1389-1401 ။PubMedCrossRefGoogle Scholar
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1984) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ မင် Malamuth & အီး Donnerstein (Eds ။ ) ၌, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (စစ။ 115-138) ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။Google Scholar
Zimring, FE (2006) ။ ကြီးစွာသောအမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုကျဆင်း။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။Google Scholar